नेपाली अफगानिस्तानबाट फर्कनेक्रम जारी, आज एकै दिन कति आए ? | Nepal Ghatana
नेपाली अफगानिस्तानबाट फर्कनेक्रम जारी, आज एकै दिन कति आए ?
प्रकाशित : ४ भाद्र २०७८, शुक्रबार २०:११
अफगानिस्तानबाट उद्धार भएका थप नेपाली नागरिकको स्वदेश फर्कनेक्रम जारी छ । आज जजिरा एयरको कुवेत–काठमाडौँ नियमित उडानबाट थप १६५ नेपाली स्वदेश फर्केका छन् । हालसम्म ४६१ नेपाली काठमाडौँ आइपुगेका तथा थप नौ जना नियमित उडानबाट आज राति आइपुग्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उद्धार भई स्वदेश आएकाहरूमा काबुलस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगमा काम गर्नेहरूका अतिरिक्त अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी गरिरहेका केही छन् ।